မှားဖျက်မိတာတွေ ပြန်ယူဖို့ ( Recuva ) ~ မျိုးကို
မှားဖျက်မိတာတွေ ပြန်ယူဖို့ ( Recuva )
06:43 Recover Tool, Software, Technique No comments
Full Version Recovery Software တွေ ရှိပေမယ့် ဒီ Free သုံးလို့ ရတဲ့ Recuva Recovery ၀ဲလေး နဲ့ ကိုယ်တို့ မှားဖျက်မိတဲ့ File တွေ ၊ Folder တွေကို ပြန်ပြီးတော့ Recovery လုပ်နိုင်ပါတယ် ..။ အားလုံး ရတယ် မရတယ် ဆိုတာထက် အတိုင်းအတာ တစ်ခု ထိတော့ ပြန်ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်...။ သုံးကြည့်ချင်ရင်တော့
သူ့ရဲ့ Procedure လေးကတော့
1. သူ့ရဲ့ Shortcut Icon လေးကို Click နှိပ်လိုက်ပါ။ပီးလျှင် Next ကိုနှိပ်ပါ။
2. ကို Recover လုပ်ချင်တဲ့ File Type အမျိုးအစား ရွေးပါ။
3. ကိုပြန်ပီး Recover လုပ်ချင်တဲ့ နေရာကို ရွေးပေးပါ။
4. Enable Deep Scan ကိုနှိပ်ပီး Start ကိုနှိပ်ပါ။
5. ဒါဆိုရင်တော့ သူက Scan ဖတ်ပေးနေမှာပါ။
6 .နောက်ဆုံးတော့ သူရှာတွေ့တာတွေကို ပြတဲ့ အခါ Recover ကိုနှိပ်ပေးပီး ကိုထားချင်တဲ့ နေရာလေး ရွေးပေးလိုက်ရုံပါ။